खेलकुद | suryakhabar.com | Page 115
आयोजक टोली मलेसियामाथि नेपालको सानदार जीत
on: २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार १४:१० In: खेलकुदTags: आयोजक टोली मलेसियामाथि नेपालको सानदार जीतNo Comments
काठमाण्डौै । मलेसियामा जारी एसिसी यू–१९ युथ एसिया कपअन्तर्गत आज भएको समूह चरणको अन्तिम खेलमा नेपालले मलेसियालाई आठ विकेटले पराजित गरेको छ । क्वालालम्पुरस्थित वायुमास ओभलमा टस हारेर ब्याटिङ ग...	Read more
on: २८ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०७:३० In: खेलकुदTags: साठी वर्षपछि इटालीबिहिन विश्वकप हुँदैNo Comments
एजेन्सी । चारपटकको विश्व विजेता इटाली आउँदो वर्षको विश्वकप फुटबलमा छनौट हुन असफल भएको छ । सोमबार राति भएको विश्वकप छनौटका लागि युरोपियन क्षेत्रको प्ले–अफ अन्तर्गत दोस्रो लेगमा स्वीडेनसँग गोल...	Read more
यसरी एकाएक विश्वकप सपनामा वाधक बन्यो स्वीट्जरल्याण्ड
on: २७ कार्तिक २०७४, सोमबार ०७:३५ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । आउँदो वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलमा छनौट हुने उत्तरी आयरल्याण्डको सपना स्वीटजरल्याण्डले पूरा हुन दिएन । प्ले अफ अन्तर्गत दोस्रो लेगमा गोलरहित बराबरीमा सकिएपछि उत्तरी आयरल्याण्ड...	Read more
कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अलराउण्ड प्रदर्शन, भारतबिरुद्ध नेपालको क्रिकेटमा ऐतिहासिक जित !!
on: २६ कार्तिक २०७४, आईतवार १६:०६ In: खेलकुदTags: कप्तान दिपेन्द्र सिंह ऐरीको अलराउण्ड प्रदर्शन, भारतबिरुद्ध नेपालको क्रिकेटमा ऐतिहासिक जित !!No Comments
काठमाडौँ । मलेसियामा जारी एसीसी उन्नाई वर्षमुनि (यु–१९) एसिया कप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज भएको दोस्रो खेलमा नेपालले भारतलाई १९ रनले पराजित गरेको छ । मलेसियाको क्वालालम्पुरस्थित बायुमास...	Read more
अर्जेन्टिनाद्वारा रुस पराजित
on: २६ कार्तिक २०७४, आईतवार ०७:३६ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । आउँदो वर्ष रुसमा हुने विश्वकप फुटबलको तयारी अन्तर्गत भएको मैत्रिपूर्ण खेलमा अर्जेन्टिना विजयी भएको छ । विश्वकप आयोजक रुससँग शनिबार राति भएको खेलमा अर्जेन्टिना १–० ले विजयी भएको हो...	Read more
शनिबार बंगलादेशसँग भीड्दै नेपाल
on: २५ कार्तिक २०७४, शनिबार ०७:५१ In: खेलकुदTags: No Comments
काठमाण्डौ । उन्नाइस वर्षमुनिको एसिया कप क्रिकेट अन्तर्गत शनिबार नेपालले बंगलादेशसँग खेल्दैछ । मलेसियाको क्वालालमपुरको किनरारा एकेडेमीको ओभर मैदानमा हुने खेल वर्षका कारर्ण सुरु हुन सकेको छैन...	Read more
पोर्चुगलको सहजै जित
on: २५ कार्तिक २०७४, शनिबार ०७:२७ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण फुटबल अन्तर्गत शुक्रबार राति भएको खेलमा पोर्चुगलले साउदी अरेबियालाई हराएको छ । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा पोर्चुगलले भ्रमण टोली साउदी अरेबियालाई ३–० ले ह...	Read more
राइनो गोल्डकप प्रतियोगिताको उपाधि संकटा क्लबलाई
on: २४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०७:४६ In: खेलकुदTags: No Comments
नवलपरासी । नवलपरासीमा सम्पन्न राइनो संरक्षण गोल्डकप फुटबल प्रतियोगिताको उपाधि संकटा क्लब काठमाडौंले जित्न सफल भएको छ । बिहीबार नेपाल एपिएफसँग भएको फाइलन खेलमा संकटा क्लब काठमाण्डौं विजयी भएक...	Read more
रोनाल्डोले नेइमारको गोप्य खबर थाहा पाएपछि…..
on: २४ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०७:२२ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । विश्व कीर्तिमानी मूल्यमा बार्सिलोनाबाट फ्रेन्च लिग वान क्लब पेरिस सेन्ट–जर्मेन (पिएसजी) गएका नेइमार क्लबमा खुशी नरहेको खबर आएको छ । नेइमार यहि सिजन बार्सिलोनाबाट पिएसजी गएका हुन् ।	Read more
यसरी गरिदैछ नयाँ विश्व लिग फुटबल प्रतियोगिताको तयारी
on: २२ कार्तिक २०७४, बुधबार ०७:३८ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । विश्व फुटबलको प्रशासकीय निकाय फिफा र युरोपियन फुटबलको प्रशासकीय निकयाले युइएफएले नयाँ विश्व लिग फुटबल सुरु गर्ने विषयमा छलफल गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय मैत्रिपूर्ण खेलहरुलाई प्रस...	Read more
आन्द्रेया पिरलोले लिए फुटबलबाट सन्यास
on: २१ कार्तिक २०७४, मंगलवार ०७:३४ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । इटालीका पूर्व मिडफिल्डर आन्द्रेया पिरलोले फुटबलबाट सन्यासको घोषणा गरेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय फुटबलबाट यसअघि नै सन्यास लिएका पिरलोले क्लब फुटबलबाट पनि सन्यासको घोषणा गरेका हुन् ।	Read more
on: २० कार्तिक २०७४, सोमबार ०७:२८ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । इंग्लिस प्रिमियर लिग फुटबल अन्तर्गत आइतबार राति भएको खेलमा लिग लिडर म्यानचेस्टर सिटीले शानदार जित निकाल्दै अग्रता ८ अंकमा पुर्‍याएको छ । घरेलु मैदानमा भएको खेलमा शीर्ष स्थानको म्य...	Read more
१५ वर्षपछि नेपालको पहिलो विजय
on: २० कार्तिक २०७४, सोमबार ०७:०९ In: खेलकुदTags: No Comments
काठमाण्डौ । नेपाली यू–१९ क्रिकेट टोलीले बंगलादेश यू–१९ माथि १५ वर्षपछि पहिलो विजय हात पारेको छ । मलेसियामा हुने एसीसी यू–१९ एसिया कप क्रिकेटको तयारीका क्रममा तीन खेलको शृंखला खेल्न बंगलादेश...	Read more
न्युजिल्याण्डसँग भारत पराजित
on: १९ कार्तिक २०७४, आईतवार ०७:२३ In: खेलकुदTags: न्युजिल्याण्डसँग भारत पराजितNo Comments
एजेन्सी । न्यूजिल्याण्डले भारतसँगको ट्वेण्टी–ट्वेण्टी क्रिकेट एक–एकको बराबरीमा पुर्याएको छ । दोश्रो ट्वेण्टी–ट्वेण्टीमा भारतलाई ४० रनले हराउँदै न्यूजिल्याण्डले तीन खेलको श्रृङ्खला एक–एकको ब...	Read more
on: १८ कार्तिक २०७४, शनिबार २०:२९ In: खेलकुदTags: संकटा सेमिफाइनलमाNo Comments
नवलपरासी । यहाँ जारी राइनो संरक्षण गोल्डकप फुटवल प्रतियोगिताअन्तर्गत आजको खेलमा संकटा क्लब विजयी हुँदै सेमिफाइनलमा प्रवेश गरेको छ । संकटाले वीरगन्ज युथ क्लबलाई २–० गोल अन्तरले हराएको थियो ।...	Read more
यस्तो दाउ गर्दैछ रियल मर्डिड
on: १८ कार्तिक २०७४, शनिबार ०७:५२ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । स्पेनिस फुटबलका दुई महारथी क्लब बार्सिलोना र रियल मड्रिडबिच खेलमा मात्रै होइन खेलाडी अनुबन्धमा पनि प्रतिस्पर्धा हुने गरेको छ । दुवै क्लब विश्वका उत्कृष्ट खेलाडी आफ्नो क्लब भित्र्या...	Read more
युरोपा लिग फुटबलमा लायनको जित
on: १७ कार्तिक २०७४, शुक्रबार ०७:५० In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । युरोपा लिग फुटबल अन्तर्गत बिहीबार राति भएको खेलमा इभर्टनलाई लायनले ३–० को अन्तरमा हराएको छ । पहिलो हाफ गोलरहित बराबरीमा सकिएको खेलमा लायनका लागि ६८ औँ मिनेटमा टारोरे, ७६ औँ मिनेटम...	Read more
on: १६ कार्तिक २०७४, बिहीबार ०७:४२ In: खेलकुदTags: No Comments
एजेन्सी । इंग्लिस क्लब म्यानचेस्टर सिटी च्याम्पियन्स लिग फुटबलको अन्तिम १६ मा प्रवेश गरेको छ । समूह ‘एफ’ अन्तर्गत बुधबार राति भएको खेलमा म्यानचेस्टर सिटीले इटालियन क्लब नापोलीलाई ४–२ ले हरा...	Read more
आजदेखि राइनो संरक्षण गोल्डकप सुरु हुँदै
on: १३ कार्तिक २०७४, सोमबार ०८:२८ In: खेलकुदTags: No Comments
नवलपरासी । मोफसलमानै सर्वाधिक धनराशिको पुरस्कार रहेको राइनो संरक्षण गोल्डकप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता आजदेखि नवलपरासीमा शुरु हुँदैछ । नवलपरासीको कोल्हुवामा गैँडा संरक्षणका लागि हुँदै आइरहेको र...	Read more